आठ वर्षदेखि बालबच्चा सोधिरहन्छन्ः बाबा यसपालि पनि घर नआउने ?
सुरक्षा गार्डका दसैं
शिलापत्र संवाददाता काठमाडौं, १६ असाेज
चारैतिर दसैंको उल्लास छ । विदेश गएकाहरू गाउँ फर्किएका छन् । शहरमा बस्नेहरू पनि गृहजिल्लातिर लागिसके ।
चारैतिर दसैंको रौनक छाएको बेला बैंकका सुरक्षा गार्डलाई दसैं कत्तिको लागेको छ त ? यसबारे बैंकका केही सुरक्षा गार्डको अनुभूति यहाँ समेटिएको छ ।
सिद्धार्थ बैंकमा सुरक्षा गार्डका रूपमा काम गर्ने सर्लाहीका केवल थापाले परिवारसँग दसैं नमानेको ८ वर्ष भयो । यस पटक पनि उनले दसैंमा बिदा पाएनन् ।
उनी दसैं सहकर्मीसँग मिलेर मनाउने सोचमा छन् । ‘हामी गार्डमध्ये अलि बढी उमेरको गार्डबाट हामी टीका थाप्छौं’, थापाले भने, ‘थोरै समयमा मीठो–मसिनो के हुन्छ खान्छौं र काममा लाग्छौं ।’
उनले त यता दसैंको योजना बनाइसके तर घरमा भएको नाबालक छोरा भने अझै बाबा आऊलान् भन्ने आशामा छ । त्यही भएर त घरबाट छोराले फोनमा सोध्छ, ‘बाबा घर नआउने ?’
घरबाट सानो छोराले ‘बाबा घर नआउने ?’ भन्दा थापा भक्कानिन्छन् । ‘जिम्मेवारी लिएपछि गर्नैपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘तर घरबाट कहिलेकाहीँ छोराले बाबा घर नआउने भन्दा भक्कानो छुट्छ ।’
दसैंको बेलामा अरू बेलाभन्दा काम गर्न अझै बढी चुनौतीपूर्ण रहेको उनी बताउँछन् । थोरै तलमाथि भयो भने जागिर जाने उनी बताउँछन् । ‘अरू बेलाभन्दा यो बेला अझै बढी चनाखो हुनुपर्छ,’ थापाले भने, ‘यति बेला कुनै घटना भयो भने सबै दोषको भागेदार हामी नै हुन्छौं ।’
यति चुनौतीपूर्ण र जोखिमपूर्ण काम गर्दा पनि बाहिरी मानिसहरूले सुरक्षा गार्डलाई गर्ने व्यवहारप्रति भने उनको गुनासो छ । भन्छन्, ‘हामीलाई मान्छेजस्तो पनि व्यवहार गरिँदैन ।’
बैंकका सुरक्षा गार्ड उद्धव राउत काठमाडौंका स्थानीय हुन् । तर, उनले ढुक्कले दसैं मान्न पाउँदैनन् । १३ वर्षदेखि बैंकको सुरक्षा गार्डका रूपमा काम गर्दै आएका राउत अहिलेसम्म दुई पटक पनि दसैं मजाले मनाउन नपाएको बताउँछन् ।
‘टाढाका साथीहरूलाई बिदा दिएपछि नजिकैकाले सुरक्षा दिने हो,’ उनी भन्छन्, ‘साथीहरू बिदामा बसेपछि नजिकै घर भए पनि दसैंमा पर्याप्त समय पाइँदैन ।’
झण्डै १५ वर्षदेखि गोदावरीका श्रीकृष्ण थापा नेपाल बैंकमा सुरक्षा गार्डको रूपमा करारमा काम गर्दै आएका छन् । उनलाई पनि दसैंका लागि भनेर बिदा पाएको सम्झना छैन । इन्डियन आर्मीबाट रिडायर्ड भएर बैंकमा जागिर गर्न थालेका थापाले घरमै गएर राम्रोसँग दसैं मनाउन नपाएको ३० वर्ष भयो ।
कहिलेकाहीँ आलोपालो ड्युटी मिलाएर घर जाने गरेको बताउने उनी घर पुगेपछि बैंकको सुरक्षामा कुनै समस्या पो आयो कि भन्ने चिन्तामा हुने बताउँछन् । ‘हामीलाई ‘घाम लागे पनि, पानी परे पनि ड्युटी बस्न पर्यो वीरबहादुर’ भनेजस्तो छ,’ उनले हाँस्दै भने, ‘एउटा चार्ड, दसैं मनाउँदा नै जागिर गयो भने त रोजीरोटी नै बन्द हुन्छ ।’
३८ जना सेक्युरिटी गार्ड भएको नेपाल बैंकमा दसैंको समयमा १५ जनाले छुट्टी पाउँछन् । बाँकीले बैंकमा जागिर गर्दै दसैं मनाउने गरेका छन् । थापा भन्छन्, ‘हामी यही ड्रेसमा खाँदै ड्युटी गर्दै दसैं मनाउँछौं ।’
थापा र राउत त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । उनीहरूजस्तै थुप्रै सुरक्षा गार्ड छन्, जो परिवारसँगको दसैं त्यागेर आमनागरिकको पैसाको रहने बैंकको सुरक्षामा खटिने गरेका छन् ।
खासगरी यो बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुरक्षाको विषय निकै संवेदनशील मानिन्छ । दसैं मनाउन यति बेला काठमाडौं उपत्यकाबाट झण्डै ३० लाख मानिसहरू आ–आफ्नो गृहजिल्ला प्रस्थान गर्ने गर्दछन् ।
यही समयमा विभिन्न लुटपाट र चोरी डकैतीजस्ता घटना हुने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले पनि प्रहरीसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सुरक्षा गार्डले दसैंतिहार भन्न पाउँदैनन् ।
दसैंमा घर जान नपाउनुले भन्दा पनि उनीहरू आफ्नो कामको सम्मान नहुँदा बढी दुःखी देखिन्छन् । परिवारसँग दसैं मान्न छाडेर काम गर्दा पनि ‘जाबो गार्ड नै त हो नि’ भन्ने बैंककै कर्मचारी तथा अन्य मानिसको व्यवहारले निकै दुःख लाग्ने उनीहरू बताउँछन् ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, असोज १६, २०७६, १०:३०:००